War Deg Deg Ah:Dayuuradihii Uganda Oo Lala'aa Oo Mid Ka Mid Ahi Bur-Burtay - KHAATUMO ONLINE TV
War Deg Deg Ah:Dayuuradihii Uganda Oo Lala'aa Oo Mid Ka Mid Ahi Bur-Burtay
Posted by laascaanood on August 13, 2012 at 8:20 AM
Diyaaradihii Uganda Ee Lala’aa Ayaa Mid Ka Mid Ah Ku Bur-Burtay Buurta Caanka Ah Ee Lagu Magacaabo Mounty Kenya Oo Kutaala Kenya,Sida Uu Saxaafada U Sheegay...
Sida Uu Saxaafada U Sheegay Sarkaal Katirsan Policeka Kenya Oo Lagu Magacaabp Francis Munyambu.
Dadaal ay muujiyeen Ciidamada Policeka Kenya oo ay ku raad goobayeen Dayuuradihii Uganda ee lawaayay Axadii ayaa waxa ay heleen Ciidamada Policeka Kenya mid ka mid ah dayuuradihii oo ku bur-burtay Buurta way nee lagu magacaabo Mt-Kenya siada uu u sheegay saxaafada sarkaal ka tirsan Ciidamada Policeka Kenya ee gobolka Central Provence ama gobolka dhexe sarkaal kaas oo lagu magacaabo Francis Munyambu.
Sarkaalkan ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo sababta ay u soo dhacday diyaaradani”waxana uu yirri waanu baadhi doonaa marka aanu helno sababta ay u soo dhacdayna waasu shaacin doonaa”.
Sarkaalka ayaa waxa uu intaa raacshay Helicobter tii labaad waxaan u malaynaynaa in ay ku jirto iyana kaynta Meru iyana waan ku raad joognaa mesha ay ku dan baysay warar aan ka haynana saas ayay sheegayan laakiin waan sugayna illaa inta aanu ka helayno cadayn buuxda ayuu yiri sarkaalku.
Dhanka kale sadexdan diyaaradood eel ala’aa ayaa mid ka mid ah Pilot kii waday ama duuliyihii ayaa waxa u la soo xidhiidhay sarkaal ka ku sugan Nairobi oo uu u sheegay in ay bad-baadiyaan waxa aanu ku suganahay Mount Kenya Magacaygu waa Bogita Ongeri sarkaalkii soo hadalay”ayaa yiri sidaa.
Diyaaradahan oo ka koobnaa Afar diyaaradood ayaa waxaa ka bad-baaday mid ka mi ah oo soo gaadhay Wajer Kenya halka la waayay sadex mid ka mid ahna la helay hada iyada oo ku bur-burtay Mount Kenya Kaynta layiraahdo oo Kenya ku taala sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Policeka Kenya.
Diyaaradahan ayaa waxay ka soo qaadeen Uganda Ciidamo aan tiradooda la shaacin iyaga oo ka soo kicitimay Gag-Gida Diyaaradaha ee Entebbe .
Ciidamadan ayaa waxay ka mid noqon lahaayeen kuwa Nabad ilaalinta u jooga soo maaliya ee AMISON.